Sina tsy misy MOQ Custom Knit Polyester Spandex Digital Print Liverpool Bullet Fabric pirinty ho an'ny mpanamboatra lamba sy Bow Supplier | Wenchang
Tsy misy MOQ Custom Knit Polyester Spandex Digital Print Liverpool Bullet Fabric pirinty ho an'ny Bow Textile
Item No: KWB-2125
Fitaovana ： 95% Polyester 5% Spandex
KATEGORIAM-pamokarana FABRIC amin'ny bala
ITEMY NO KWB-2125
ara-nofo 95% Polyester 5% Spandex
endri-javatra Maina / mivelatra / miaina / maloka haingana
Ampiasao Ankizy / Akanjo / Kitapo
Ny jacquard Monochrome dia lamba vita amin'ny jacquard-ny lamba volondavenona jacquard dia tenona tenona jacquard ary avy eo nolokoina sy vita. Ny lamba vita dia loko matevina; jacquard maro loko dia lamba jacquard vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny jacquard. -fatra vokatry, ary avo kokoa ny naoty. Tsy voafetra ny sakan'ny lamba, ary ny lamba landihazo madio dia mihena kely, tsy baolina, ary tsy manjavona. Ny lamba Jacquard dia matetika ampiasaina amin'ny fitaovana famokarana akanjo avo lenta sy antonony na fitaovana ampiasaina amin'ny indostrian'ny haingon-trano (toy ny lambam-baravarana, fitaovana sofa) Ny fizotry ny famokarana lamba jacquard dia sarotra. Ny kofehy vita amin'ny kofehy sy ny kofehy vita amin'ny kofehy dia mifamatotra ambony sy ambany, mamorona lamina samy hafa, miaraka amin'ny concavities sy convexities, ary lamina tsara tarehy kokoa toy ny voninkazo, vorona, trondro, bibikely, vorona ary biby dia tenona.
Ny endriny dia malefaka, marefo ary malama noho ny volony tsy manam-paharoa, gloss tsara, drape tsara ary permeabilité amin'ny rivotra, ary haingam-pandoko (fandokoana kofehy). Ny lamin'ny lamba jacquard dia lehibe sy tsara tarehy, ary ny loko dia miavaka sy telo-dimensional, raha ny lamin'ny lamba jacquard kely kosa dia somary tsotra sy tokana.
Lamba Jacquard (ravina 6)
Lamba jacquard satin (lamba): ny hena sy ny kofehy dia mifamatotra farafahakeliny indray mandeha isaky ny kofehy telo, noho izany ny tenona satin dia mampitombo ny hakitroky ny lamba, ka matevina kokoa ny lamba. Ny vokatra manenona satin dia lafo kokoa noho ny vokatra tenona tsotra sy ny tenona. Ny lamba tenona misy tenona satin dia antsoina hoe lamba satin avokoa. Satin lamba manana ny lafiny aloha sy aoriana. Ny teboka misy ny interwave amin'ny loop iray feno dia kely indrindra, ary ny float no lava indrindra. Ny velaran'ny lamba dia saika ahitana floats rehetra any amin'ny làlambe na fitenenana. Malemy ny firafitry ny lamba satin. Ny lamba satin dia misy sisiny eo aloha sy aoriana, ary malama ny tampon'ilay lamba, tsara ary mamiratra. Ny lamba satin mahazatra indrindra dia satin striped, antsoina hoe satin strip. Mizara roa karazana lamba izy: fehin-kibo satin 40 amin'ny 2 metatra 4 ny sakany ary fehin-kibo 60 satin amin'ny 2 metatra 8 ny sakany. Ny fanenomana voalohany ary avy eo ny fandokoana, ity karazan-damba ity dia miloko mazàna amin'ny ankapobeny, miaraka amin'ny fanitarana tsivalana. Ny lamba landihazo madio dia mihena kely, tsy baolina ary tsy mora manjavona.
Satin jacquard lamba (lamba)
Fahalalana ny "Satin Jacquard Fabric".
Twill: ny vala sy ny kofehy dia mifangaro farafahakeliny indray mandeha isaky ny kofehy roa, izany hoe 2 ambony sy 1 midina na 3 ambony sy 1 midina. Manisy teboka mifangaro hoavin'ny kofehy sy kofehy hanovana ny firafitry ny lamba, izay antsoina hoe lamba twill. Ny mampiavaka an'ity karazan-damba ity dia somary matevina izy io ary manana fahatsapana firafitra telo-refy. Misy sampana 30, sampana 40 ary 60 sampana.
Lamba satin: ny kofehy sy ny kofehy dia mifamatotra indray mandeha farafaharatsiny kofehy telo, noho izany ny tenona satin dia mahatonga ny lamba ho matevina kokoa, ka matevina kokoa ilay lamba. Ny vokatra manenona satin dia lafo kokoa noho ny vokatra manenona tsotra sy kofehy vita amin'ny kofehy, ary malama ny lamba, milamina ary mamiratra. Ny tenona tsotra, ny tenona vita amin'ny kofehy ary ny tenona satin dia ireo fomba telo fanaovan-tsakafo sy fikorontanana. Tsy misy mahasamihafa manokana ny tsara sy ny ratsy. Samy manana ny mampiavaka azy ny tsirairay. Anisan'izany ny satin dia tsy maintsy ho ny lamba landihazo madio tsara indrindra.
Teo aloha: Fanamainana haingana Jacquard Mesh 84% Nylon 16% Spandex lamba manja lamba ho an'ny akanjo / Fanatanjahan-tena / Palitao
Lamba fanontam-pirinty namboarina
Lamba Bullet Liverpool
Fanontana ho an'ny lamba Bow